WARBIXIN: 10 Xiddig Ee Ugu Hadal Haynta Badnaa Suuqa Kala Iibsiga Maanta Oo Isniin Ahayd. %
Kulamada kubada cagta ayaa laga yaabaa in ay joogsadeen sabab la xidhiidha xanuunka Coronavirus laakiin suuqa kala iibsiga ayaan joogsan.
Nolosha ayaa si hoose ugu socota kooxaha laakiin waxa ay isha ku hayaan ama la socdaan xiddigaha ay u dhaqaaqi lahaayeen suuqa kala iibsiga xagaaga.
Hadaba waxa aan warbixintan ku soo bandhigi doonaa 10-ka xiddig ee ugu hadal haynta badnaa suuqa kala iibsiga maanta oo Isniina ah.
Barcelona Oo Doonaysa Alex Telles
Barcelona ayaa lagu soo waramayaa in ay doonayso saxiixa xiddiga daafaca bidix ee kooxda Fc Porto ee Alex Telles kaas oo ay doonayso in ay ku xoojiso daafaca Bidix waxana lagu qiimeeyaa xiddiga 27 jirka ah 40 milyan oo euro.
Liverpool Oo Isha Ku Haysa Fabian Ruiz:
Waxa ay u muuqataa in uu xiddiga khadka dhexe ee kooxda Napoli noqon doono mid mid ah xiddigaha sida weyn loo hadal hayn doono xagaaga.
Tababare Klopp ayaa bartilmaameedkiisa ugu weyn ka dhigtay xiddiga reer Spain xilli uu tababaraha reer Germany isku diyaarinayo in uu dhiso koox ku tartanka koobabka xilli ciyaareedka dambe.
Phillipe Coutinho Oo Ku Wajahan Premier League:
Xiddiga Phillipe Coutinho ayaa ku laaban kara England.
Xiddiga reer Brazil oo haatan amaah ku jooga Bayern Munich aaya wali si weyn looga qiimeeyaa England waxana uu wargayska Mirror sheegayaa in ay kooxaha Tottenham, Arsenal, Manchester United & Chelsea dhamaantood doonayaan saxiixa xiddiga.
Borja Valero Oo Isaga Tagaya Inter Milan:
Xiddiga reer Spain ee khadka dhexe ayuu xagaagan dhici doonaa heshiiskiisa Inter Milan waxana uu ka baxay qorshaha Tababare Antonio Conte.
Wargayska Tuttosport ayaa sheegaya in uu xiddiga 35 jirka ah isaga tagi doono Inter kuwaas oo haatanba badalkiisa u doonaay xiddiga Manuel Locatelli.
Ibrahimovic Oo Isaga Tagaya Ac Milan:
Waxa haatanba la xaqiijiyay in uuna Zlatan Ibrahimovic heshiis cusub u saxiixi doonin kooxda Ac Milan dhamaadka xilli ciyaareedkan waxana si weyn loo hadal hayaa in uu khabiirku isaga fadhiisan doono ciyaaraha kubada cagta.
Jose Callejon & Napoli Oo Aan Wali Heshiis Cusub Isku Afgaran:
Heshiiska Callejon ee Napoli ayaa dhici doona xagaaga laakiin kooxda Napoli ayaan wax heshiis la gaadhin xiddiga waxana uu wargayska ABC sheegay in ay kooxaha Sevilla iyo Ac Milan doonayaan saxiixa xiddiga.
Jonh Terry Oo Ka Hadlay Sancho & Chelsea:
Kabtankii hore ee kooxda Chelsea John Terry ayaa ku kalsoon in ay Chelsea la soo saxiixan doonto xiddiga Jadon Sancho xagaaga waliba xiddiga 19 jirka ah wax weyn ku soo kordhin doono Blues.
Man United Oo Aan Ka Rajo Dhigin Jude Bellingham:
Kaliya waa 16 jir xiddiga Jude Bellingham waxana uu ka mid yahay dheemanka u soo kacaya kubada cagta isaga oo qaab ciyaareed cajiib ah ku jira xilli ciyaareedkan.
Wargayska Mirror ayaa sheegaya in ay Man United haatan ugu cad-cadahay ku guulaysiga saxiixa xiddiga da’yarka ah.
Jose Mourinho Oo Doonaya Alex Grimaldo:
Jose Mourinho ayaa lagu soo waramayaa in uu bartilmaameedkiisa ugu weyn ka dhigtay xiddiga daafaca Bidix uga ciyaara kooxda Benfica ee Alex Grimaldo waxana uu heshiiska xiddiga ee Benfica dhici doonaa xagaaga 2023 waxana lagu heli karaa 50 Milyan oo euro.
Weeraryahan ka dheela horyaalka MLS-ka Mareykanka: “Cristiano Ronaldo ayaa ka wanaagsan Lionel Messi, maxaa yeelay…)